Varanda muRoma, uye Dhayi Yepepuru yekuFenikiya | Waizviziva Here
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Mongolian Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Varanda vaibatwa sei pasi peutongi hweRoma?
Simbi yaiiswa muhuro mevaranda veRoma
MuUmambo hweRoma, vakawanda vaiitwa varanda pashure pokukundwa muhondo kana kuti kutapwa. Vaya vaitapwa vaitengeswa uye kakawanda kacho vaisazombodzokerazve kumusha kwavo kana kuzomboonazve mhuri dzavo.
Varanda vakawanda vaishandiswa zvokufa mumigodhi, asi vaya vaishanda muminda nemudzimba vaiva nani. Muranda aigona kumanikidzwa kupfeka simbi muhuro, yaiva yakanyorwa ichivimbisa mubayiro kune munhu aizodzosa muranda wacho kuna tenzi wake kana atiza. Vaya vairamba vachiedza kutiza vaigona kuiswa mucherechedzo pahuma, kazhinji wakanyorwa kuti F achimiririra fugitivus (munhu ari kutiza).
Bhuku remuBhaibheri raFirimoni rinotaura nezvemuapostora Pauro achidzosera muranda akanga atiza ainzi Onesimo, kuna tenzi wake Firimoni. Kunyange zvazvo Firimoni aiva nekodzero yepamutemo yokuranga Onesimo zvakasimba, Pauro akakumbira Firimoni kuti ‘amugamuchire nomutsa,’ achiratidza rudo uye ushamwari.—Firimoni 10, 11, 15-18.
Nei Fenikiya yekare yaiva nemukurumbira wedhayi yepepuru?
Fenikiya, iyo ingangodaro iri Lebanon yemazuva ano, yaizivikanwa nedhayi yepepuru yekuTire. Mambo Soromoni weIsraeri yekare akashongedza temberi yake ne“mvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru” dzakagadzirwa neimwe nyanzvi yokuTire.—2 Makoronike 2:13, 14.
Pepuru yokuTire ndiyo yainyanya kukosha panguva yacho, kunyanya nemhaka yokuti raiva basa rakakura kuigadzira. Kutanga, vabati vehove vaiunganidza hozhwa * dzakawanda kubva mugungwa. Paitodiwa hozhwa dzinenge 12 000 kuti pagadzirwe dhayi yechipfeko chimwe chete. Zvadaro, hozhwa dzacho dzaibviswa mumatemhe adzo kuitira kuti dhayi yacho ibudiswe. Vagadziri vedhayi vaibva vasanganisa dhayi yacho nemunyu, voita kuti musanganiswa wacho uwane mhepo uye zuva kwemazuva matatu. Vaibva vausanganisa nemvura yemugungwa, vouisa mumudziyo wakavharwa, vougadza pamoto mushoma kwemamwezve mazuva.
Kwemazana emakore avaiita zvebhizimisi uye vachipamba dzimwe nyika, vaFenikiya vakaramba vachitengesa dhayi yepepuru yekuTire uye vachiigadzira. Pane zvisaririra zvezvinhu zvaishandiswa pakugadzira dhayi zvakawanikwa munharaunda dzakapoteredza Gungwa reMediterranean uyewo muCádiz, kuSpain.
^ ndima 8 Matemhe ehozhwa dzacho akareba masendimita 5 kusvika 8.
Waizviziva Here?—April 2014
April 2014 | Unofanira Kunyengetera Here?
NHARIREYOMURINDI April 2014 | Unofanira Kunyengetera Here?